चीन सरकार र राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपालको सहयोगमा कोरोना नियन्त्रणमा राहत सामग्री बितरण #Covid19 • Health News Nepal
आज चीन सरकार कान्सु प्रान्त सरकारको सहयोग र राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपाल NDAN लुम्बिनी शाखा को संयोजनमा प्राप्त कोभिड १९ नियन्त्रणका राहत सामाग्रीहरु २०००० थान सर्जिकल मास्क र १००० सेट PPE संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत बागमती प्रदेश र पाँच न. प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरियो।
कार्यक्रममा चीन सरकार कान्सु सरकारको सहयोगमा प्राप्त सामाग्री त्यहाँका प्रतिनिधि सृ होङ्ग होङ्ग ज्युले नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय योगेश भट्टराई ज्यु र राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपाल NDANको केन्द्रीय महासचिव डा.रमेश ढकालको समुपस्थिमा मन्त्रालयका सचिव सृ केदार ब. अधिकारीज्यु लाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। सो सार्यक्रममा संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुको पनि बाक्लो उपस्थिती थियो। चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलबाट सृ चौ चोङ्ग र चु फङ्ग को पनि उपस्थिती रहेको थियो। सहयोग प्रक्रियाको संयोजन र कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाल राष्ट्रिय चिकित्सक संघ लुम्बिनी प्रदेश शाखाका महासचिव डा. सागर न्यौपानेले गर्नुभएको थियो।
चिनियाँ सरकारी प्रतिनिधि सृ होङ्ग ज्युले कान्सु प्रान्त सरकारले नेपाल सरकारको कोभिड-१९ को प्रकोप नियन्त्रण अभियान प्रती एक्यवद्धता प्रकट गर्दै नेपाल सरकारका दुई वटा प्रदेशमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीलाई लक्ष्यित गर्दै चिकित्सकिय सामाग्री उपलब्ध गराएको जानकारी दिदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय योगेश भट्टराई ज्युको हार्दिक सहयोग र चीन सरकारको सहयोग प्रतिको समवेदनशील प्रती विशेष धन्यवाद दिदै सम्पुर्ण मन्त्रालय परिवारलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो।
मन्त्री भट्टराईले चिनियाँ सरकार कान्सु प्रान्तको सहयोगमा प्राप्त कोभिड नियन्त्रणका चिकित्सकिय सामाग्री नेपालका बागमती तथा प्रदेश न. ५ सरकार अन्तरगतका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मि, कार्यरत सुरक्षाकर्मी लगायत स्वयंसेवक मित्रहरूको लागि पक्कै उपयोगी सिद्ध हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै, चीन सरकारको यो कार्यको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। चीन-नेपाल मित्रवत सम्बन्धको निरन्तरता स्वरुप नेपाललाई प्रदान गरिएको सहयोग निकै उपयोगी हुने र भविष्यमा पनि दुई देशले यस्ता सहयोग र सहकार्य अगाडि बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सुरक्षित पेशा खुशी चिकित्सक सिद्धान्त लिएको राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपाल NDAN आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै राम्रा काम गर्दै अगाडी बढ्ने केन्द्रीय महासचिव डा. ढकालले बताउनुभयो।
भविष्यमा पनि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न चीन सरकार इक्छुक रहेको जानकारी चिनियाँ प्रतिनिधि होङ्गज्यु ले दिनुभयो।